MOUNTAIN LOFT eBuiza - I-Airbnb
MOUNTAIN LOFT eBuiza
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguEduardo
Intaba yethu LOFT yindawo eyodwa, ngakumbi izibini okanye izibini ezinabantwana. I-Loft idityaniswe kwindalo kwaye ineendawo ezinkulu, ezihonjiswe kakuhle. Ngaphandle ungayonwabela ithala le-solarium, ichibi lamanzi endalo, ikhitshi lasehlotyeni elinebarbecue kunye neveranda engakholelekiyo yepanoramic eneembono zeentaba. Ingaphakathi layo liyindawo evulekileyo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela lamatye lendalo labucala, aliswele iinkcukacha.
ILoft yethu inayo yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kamnandi neqabane lakho okanye usapho lwakho.
Zonke iinkcukacha ziye zanyamekelwa ukuze umxhasi akhathazeke kuphela ngokuzonwabisa nokuphumla.
Lonke ugcino lubandakanya ezo zinto ziyimfuneko ukuze zisetyenziswe kwaye zonwabele ikona nganye yeNdlu.
Intaba yethu LOFT ikwifama ekwidolophu yaseBuiza ekwintaba yaseLeonesa.
Imisebenzi ephambili kunye neendawo zomdla ziindlela ezininzi eziphawulweyo zokuhamba, iLas Cuevas de Valporquero, iVia Ferratas yokukhwela, ukuhamba kunye nokhenketho lwebhayisekile, i-canyoning caving kunye nemisebenzi yamanzi ePantano de Luna. Sisebenzisana neenkampani zokhenketho eziphambili eLeón.
Abathengi bethu baya kwamkelwa xa befika, baya kuboniswa zonke iinkcukacha zeNdlu kunye nezixhobo kunye nezixhobo zangaphandle, ngokusebenzisa imephu yommandla siya kukubonisa izinto ezikhangayo eziphambili zommandla, kunye neendlela kunye neendawo ezingaphandle. iindawo ezibalaseleyo. Ngexesha lokuhlala kwakho siya kufumaneka ngalo lonke ixesha kwaye unokusitsalela xa uyifuna.
Abathengi bethu baya kwamkelwa xa befika, baya kuboniswa zonke iinkcukacha zeNdlu kunye nezixhobo kunye nezixhobo zangaphandle, ngokusebenzisa imephu yommandla siya kukubonisa izin…